Written by ခင်သန္တာ	Tuesday, 15 January 2013 21:33	၄၆ ကြိမ်မြောက် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲ အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ကျိုး မြို့ကိုသွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြ ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကာယ ကြံ့ခိုင်မှု အားကစား အဖွဲ့ ချုပ်က အားကစား သမား တွေကို နောက်ဆုံး လူရွေးပွဲ ပြန်လုပ်ပါတယ်။tadalafil tabletsgeneric cialis online buy viagra canada cialis online cheapargaiv1987
Last Updated on Tuesday, 15 January 2013 21:39	မြူနှင်းဝေေ၀ ထင်းရှူးတောတန်း တောင်ဇလပ်ပန်းများ ပွင့်တဲ့ ချင်းပြည်နယ်
Written by ပန်းသန္တာ (မနောမြေ)	Wednesday, 05 September 2012 10:39	“??????”???? ????????????? ?????? ????????????? ??????? ?????? ??????????? ???????????? “??????????”???? ?????????? ?????? ??????? ??????????????? ???????? ?????????????
Written by ခင်သန္တာ	Tuesday, 14 August 2012 15:13	ဒီဇင်ဘာ လတိုင်း ခရီး ထွက်လေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မ ဒီနှစ်မှာတော့ သင်္ကြန် တွင်းမှ ခရီး ထွက်ဖြစ် ပါတော့တယ်။
Written by ခင်ဆုမြတ်ထွန်း	Thursday, 12 July 2012 16:04	(??????? ????) ?????????? ?????? ?????????? ??????? ????????? ??????? ????? CNPC(China National Petroleum Corporation) ???????????? ????? ??????????? ??????????
Written by ခင်ဆုမြတ်ထွန်း	Wednesday, 20 June 2012 13:35	ဖူးငုံ ဆယ်ကျော်သက် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကိုယ်တွေ့ခရီး ကဏ္ဍမှာ ဖူးငုံ အဖွဲ့သား များနဲ့ အတူ သွားခဲ့ဖူးတဲ့ မွန်ပြည်နယ် ခရီးစဉ် အကြောင်း အဖွဲ့သားများ အားလုံး အမှတ်တရ ရေးသားရာမှာ ပါဝင် ခဲ့ဖူးတာက လွဲလို့ ကိုယ်တိုင် သွားခဲ့ဖူးတဲ့ ခရီးစဉ်တွေ အကြောင်းကိုတော့ မရေးဖြစ်ခဲ့သေးပါဘူး။
Last Updated on Wednesday, 20 June 2012 14:05	မြစ်ခြေသို့ တစ်ခေါက်
Written by နေဘုန်းလတ်	Friday, 18 May 2012 12:24	အထဲမှာ အခန်းချင်း ကပ်လျက် နေခဲ့တဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်က လှမ်းခေါ်နေတာနဲ့ ကိုယ် အထဲက ထွက်လာလာချင်း ပထမဆုံး ခရီးစဉ် အဖြစ်နဲ့ မကွေးတိုင်း၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ မြစ်ခြေကျေးရွာ အုပ်စုလေးကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
Written by သိန်းသန်းလင်း(အလင်းသစ်) Thursday, 15 March 2012 15:08	နံနက် ၇ နာရီ အမှတ် ၅၆ အစုန် ရထားကြီးက မြစ်ကြီးနား မြို့ကနေ စတင် ထွက်ခွာ လာခဲ့တယ်။
Written by ဖြူပန်းနုခင်	Tuesday, 21 February 2012 11:13	ဒီမြို့လေးက ကျွန်မ အိပ်မက်တွေ ထဲမှာ မြင်ဖူးနေကျ ပုံစံမျိုး။ ရေခဲ တောင်ထွတ်တွေကြား ထွေးပွေ့ ခံထားရတဲ့၊ ကြီးမားတဲ့ တိမ်တိုက်အောက် ပန်းချီ ဆရာ တစ်ယောက်က လှပစွာ နေရာ ချထား သလိုမျိုး လှပလွန်းတဲ့ မြို့လေး တစ်မြို့ပါ။
Last Updated on Wednesday, 29 February 2012 15:19	လေယာဉ်ကြီးစီး ခရီးစဉ် မြည်သံစွဲ အင်္လကာတို့နှင့် စည်ကား တည်ရှိနေသော မြိူ့(သို့မဟုတ်) ပုလဲမြေသို့
Written by သံဗျင်ဦး	Thursday, 05 January 2012 13:05	သဘာဝ ငှက်အိမ်များ ရှိရာ၊ ဇီဝဇိုး ငှက်အော် သံလေးများ ကမ်းနားလမ်း တစ်လျှောက် ကျယ်လောင်စွာ ပျံ့လွင့်နေတဲ့ မြို့တစ်မြို့ကို ကျွန်တော် ထပ်မံ ရောက်ရှိ ခဲ့ပြန်ပြီ။
We have 158 guests online	and views	© 2008-2010 Shweamyutay.com. All rights reserved.